Qisadii Dhexmartay Wiil-Waal Iyo Raage Ugaas Dhiiggi Kudaaday Iyo Gabayadii Caanka Ahaa Gaba-Gabadii Sheekada! - Hablaha Media Network
Qisadii Dhexmartay Wiil-Waal Iyo Raage Ugaas Dhiiggi Kudaaday Iyo Gabayadii Caanka Ahaa Gaba-Gabadii Sheekada!
HMN:- Waa qeybtii xigtay ee aan idiin balanqaadnay dhameestirkeedi sheekadii dhexmartay Raage Ugaas Iyo Wiil-waal hadaba Raage maxuu falay kadib markii uu tixdii tiriyey?
Hadii Tixdaas uu tiriyay Raage Ugaas, Wadaadkii intuu is garan waayay wuxuu ku hadlo, Ayuu Yidhi, Gabadha ka yar baan ku siine, Gabayga kobtaa ku jooji raagow. Raagena yeel oo gabadhii ka yareed baa la siiyay, Walise qalbigiisu min weyntii buu la jiraa uu dhibaatada usoo maray, ee uu xeebta salkeeda uga soo qaaday faraska. Raage isla qoyskii ayuu isna ku noqday inan layaal, Garaad Faaraxna waa inan layaal, oo labadii gabdhood baa lakala qabaa. Garaad Faarax oo tixda Raage ugaas ee Hub uruursiga ah maqlay ayaa si kibir ah ugu yidhi gabadhuu qaabay, Naa ani iyo raage geedkaas baanu kusoo shixiye, intaad si fiican usoo labisato, Ta kaa yar ee raage la siiyayna soo kaxee, oo qolqolka nagu soo dul mara Shaxdii iyadoo la jeexday,oo caadi loo ciyaarahayo, Raagase shafkiisu guuxayo cadho owgeed, ayeey labadii gabdhood soo dul mareen oo mida weyni aad ulabi santahay.
Raage Ugaas baa aad il-qoodhka ula raacay, Garaad Faaraxna waa intuu rabaye, Raage Ugaas intuu ciil isla garan waayay ayuu tixdan bilaabay, labada dhinacna la is daba marsaday tixdo sababi doona dhiig daadashadii.
Raage Ugaas Warfaa:
Geenyada inaan toociyaa ila gudboonayde
sidii guluf wax weeraray cidlaan gelelafaayaaye
Kannaan dagay ……….
Garaad Faarax Garaad Wiil-Waal:
Qiyaasli’i ninkii ugu tagow qoomamaa xigiye
Raage oo kusoo gunaanaday “Mala Qoonsanayaa haduu rubadda ka qaado” iyo tooridii oo uu dhuunta ka gashay Garaad Faarax ayaa is raacay, Sidaas ayuuna Garaadkii ku dhintay
Hadaba Aqriste Sheekada markee halkaas mareyso qoraayasha sheekadan laba qeybood bee ukala saaren midna waa marka uu dilkaa geysto garaad sidaa ayuu gabdhii uujeclaa kuhelay.
balse waxaa jirto sikale oo looshegay sheekada oo ah Raage inuu kasamray gabadhii uujeclaa wax dil ahna geysanin sidiina ku qancay gabadhii ka yareyd ayada oo la oran jiray Faaduma.
hadaba sidii asigoo uqaba gabdhii maxaa xigay halkaan kala sii soco:
Raage Ugaas isagoo gabadhii la aqal galay, Colaadna jirto labadii qoys udhaxeysa, Ayaa amar ilaahay , Libaax qaaday gabadhii, kobtiina ku geeryootay Allaha Unaxariistee. Raage Ugaasna wuxuu ka marshay Gabaygan Muruguda miidhan ah ee isna caanka ah, ee uu sheegan hayo in gabadh midaa udhiganta uusan waligiiba heli doonin
Ama koox ardo ahoo quraan kaadibka u toostay
Wixii laygu kuuniyay miyaa, igu karaamoobay?
Maantana kataankii miyaa, layga kala qaaday?
Kob abaar ah meel dhexe miyaa, koore ila meeray?
Kun iyo kow kurtood dumar hadii laysu wada keeno
kolna waxaana heli hayn haween faadumoo kale’e
sidaas ayuu Raage ugaas kuwaayey gabadhii kale ee uu kusamray uuna guursaday maadama libaax ka cunay waayo Raage tii hore ee uu kow jeclanayey wuuba iska ilaaw tan ayaa jaceyl xad dhaaf ah ka keensatay wuuna ka samri waayey xaaskisa wuxuuna ku baroortay gabayga kor idinkaga muuqda.